महिला लघुवित्तको आइपीओमा ६२.४९ गुणा धेरै आवेदन, अन्तिमदिनसम्म २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढि संकलन « Artha Path
महिला लघुवित्तको आइपीओमा ६२.४९ गुणा धेरै आवेदन, अन्तिमदिनसम्म २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढि संकलन
काठमाडौं । अन्तिमदिनसम्म महिला लघुवित्त वित्तिय संस्थाको आईपीओमा १५ लाख २० हजार १९ हजार १ सय २८ जनाले आवेदन दिएका छन् । कम्पनीको आइपीओमा २ अर्ब ३४ करोड ३३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड ३४ लाख ३३ हजार ७ सय ७० कित्ताका लागि आवेदन दिएको बिक्री कम्पनीले जनाएको छ । यो सर्वसाधारणको लागि मागभन्दा ६२.४९ गुणा धेरै आवेदन परेको हो ।
तर, मध्ये १४ लाख ३० हजार ०३८ आवेदनको मात्र भेरीफाई भएका छन् । जसबाट २ करोड २० लाख २१ हजार ९० रुपैयाँको आवेदन परेको छ । बाँकी ९० हजार ९० कित्ता भेरीफाई हुन बाँकी रहेको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेडले अर्थ संसारलाई जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीले माघ ३० गतेदेखि फागुन ५ गतेसम्म प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ४ करोड रूपैयाँ बराबरको ४ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो । जसमध्ये ५ हजार कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि, २० हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र ३ लाख ७५ हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।
यी ३ विकास बैंकमा सीईओ रिक्त हुँदै, को-को छन् आकांक्षी ?
लुम्बिनी विकास बैंक, सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक र कामना सेवा विकास बैंकको सीईओ रिक्त हुँदै काठमाडौं
हिमालयन हाइड्रोपावरको आईपीओमा झन्डै २ अर्ब संकलन, कतिले भरे आवेदन ?
काठमााडौं । हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओमा अन्तिम दिन सम्म ९ गुणा भन्दा बढी आवेदन परेको